Just In: Wararkii ugu dambeeyey weeraradii aragagixiso ee Norway, dhimashada 94 qof – SBC
Just In: Wararkii ugu dambeeyey weeraradii aragagixiso ee Norway, dhimashada 94 qof
Posted by editor on July 23, 2011 Comments
Warbixin dhameystiran, tirada dhimashada, masuuliyada qaraxa, ninka argagixisada ah ee weerarkan geystey haybtiisa, dareenka dadka & hadalada Booliiska, sawiro & dheeraad hoos ka akhriso.
Dhimashada oo gaartey 94
Muslimiinta oo aan wax shaqo ah ku laheyn weeraradaasi Argagixiso
Ninka weerarka toogashada ka dambeeyey waa Norwegian Islaamka aad u necbnaa
Fariin uu Tweitterka galiyey ninkaasi argagixisada ah oo uu ku sheegay in “Fikrada hal aaminsan yahay ay u dhiganto 100 kun oo qof”
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya weeraradii argagixiso ee shaley ka dhacay wadanka Norway gaar ahaan magaalada caasimada ah & Jasiirada Utoya kuwaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo hada sida la xaqiijiyey dad gaaraya 94 qof.
Anders Breivik Islaam naceyb ayuu caan ku yahay
Ninka weerarka argagixisada ah ee toogashada geystey waxaa lagu magacaabaa Anders Breivik waa 32 sano jir wuxuu u dhashay Norway, ninkaasi wuxuu caan ku ahaa fikradaha islaam naceybka ah isagoo sidoo kale aad uga soo horjeeday dadka soo galootiga ah ee wadankaasi degan.
Booliisku waxay rumaysan yihiin inay xiriir leeyihiin weerarka toogashada ah ee Jasiirada ka dhacay & qaraxii lala beegsadey xafiiska Ra’isalwasaaraha wadankaasi.
Haweenay lagu magacaabo Carol Sandbye oo u hadashay Booliiska ayaa sheegtey in ninka la qabtey lagu soo oogayo laba dacwo oo la xiriira argagixisnimo, wuxuuna ka soo muuqan doonaa maxkamad mudo sadex maalmood gudahood ah.
Ninka weerarka argagixisada ah loo qabtey waxaa la sheegay in uu ka tirsan yahay koox xagjir Kirishtaan ah oo mayalkoodu aad u adag yahay.
Weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca Norway 50 sano
Weeraradan argagixiso ee ka dhacay Norway waxaa la sheegay in ay yihiin kuwii ugu darnaa ee ka dhaca Galbeedka Yurub tan iyo sanadkii 2004-tii xiligaasi oo la qarxiyey tareemada Magaalada Madrid ee caasimada Spain oo ay ku dhinteen 191 qof, sidoo kale wuxuu ahaa weerarkii ugu xumaa ee dhimasho ee ka dhaca Norway tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka.
Ninka hubaysan ee weerarka toogashada ka geystey jasiirada Utoya waxaa la sheegay in uu u yeertey dadkii ku sugnaa goobtaasi oo u badnaa dhalinyaro markii ay ku soo dhawaadeena wuxuu ku bilaabay in uu laayo isagoo waliba hubsiimo ku sameeyey qof kasta oo uu xabada la helay si uu u hubsado in uu dhintey iyo in kale.
Johan Fredriksen oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan SWAT team wuxuu sheegay in ninka weeraradan ka dambeeyey uu waxyaabaha qarxa ku xiray dhismaha Oslo ee ku yaal ee dawlada, isagoo ka dibna aaday jasiirada u baqoolay halkaasi oo uu toogasho saf mar ah ka geystey.
Fredriksen wuxuu toogashada wadey mudo 30 daqiiqo ah, waxaana dhalinyarada ninkan uu laayey ay waarkood ku daateen badda, iyadoo sidoo kale ay jiraan kuwa baxsanayey oo badda isku guray,kuwaasi oo qaarkood qaraqmeen kuwana ay la ildaran yihiin qabowga biyaha oo ay naf bideen.
Tirada dhimashada jasiirada Utoya hada waxay maraysaa 81 qof waxaase laga cabsi qabaa inay sii kororto maadama ay jiraan dhaawacyo hali ah.
“Janno yar oo naar Isku badashay”
“Utoya waxay ii aheyd meel aan ku qaadan jirey waqtigeyga ciyaalnimadeydii, janadasi yar waxay shaley isku badashay naaf” sidaasi waxaa yiri Ra’isalwasaaraha Norway Storberget.
Booliisku waxay sheegeen in ninka weeraradan argagixiso geystey uu kaligiis falalkan sameeyey, iyadoo aanay u muuqan in uu jiro xiriir caalami ah oo ka dhaxeeya weeraradan & hawlgalada argagixisada caalamiga ah.
waa sax haday gaaladu islaysay in tay lahaayeen waa muslim waxa naqar xiyay ha ogaadeen argagixisadu in ayna ahayn muslim uun oo ay gaaladubaleedahay
ha ogaadeen gaaladuba in ayaleeyihiin terrooriism oo ayna ahayn muslim ka oo qudh ah waxa wax qar xiyaa
you have be understand Muslim not only terror Christian also the part of terror.